U DIIWAAN Dornier Do328 Turbo FSX - Rikoooo
downloads 15 678
Do328 aasaasiga ah marka hore u duulay 6 December 1991, oo waxay galeen adeega ganacsiga ee October 1993. sooctey cusub The 328 ee loo oggol yahay raaxo fadhiga 3-socodka joogtada ah, la iman kara ee qaabeynta 4-taliska ah. Marka lagu daro garabka supercritical horumariyo ka Dornier ee Do 228, this siiyey safar 328 fiican iyo fuuli awoodaha. In 2005, Authority Australia Maritime Safety (AMSA) abaalmariyey heshiis si AeroRescue for Search long-range iyo Samatabbixinta (SAR) awood agagaarka Australia.
Shan 328-100s ayaa isa soo taraysa u wakiishay ka April 2006 inay February 2007 oo fadhigoodu agagaarka xeebaha Australia si ay u bixiyaan saacad 24 ah, 30 awoodda jawaab daqiiqo.
In January 2008 guud ahaan diyaarad 80 Dornier 328-100 ku hadhay adeeg airline.
Ku dar repaints 3, xirmo dhamaystiran oo tayo fiican leh